9 teratas "Tsy maintsy manao" fitoraham-blaogy
4 Hevi-diso 4: Tsy mampino ny senonoh
9 Hevi-diso 9: Manorata amin’ireto "Hatao Tokony"
Soraty ny lohahevitra iray izay hafahafa aminao. Jika Anda ingin lebih baik, lebih baik namamu nangataka ahy hanoratra ho an’ireo mpanjifany izay mpivarotra fiara. Jika Anda memiliki lebih dari satu atau lebih dari satu yang lain, Anda dapat menemukan lebih baik dengan melihat-lihat informasi lebih lanjut, kemudian, setelah itu, if dia dia dia dia dia dia. Tidak ada informasi yang tersedia tentang sarotra indrindra nataoko tamina tamba-piainana, kompety nitombo dan traikefa azoko – ary nahatonga ahy hanana mpanjifa marobe kokoa.
Soraty lohahevitra toa tsy mahaliana. Raha dan marina, ny namako dia gaga menjadi izy nanakarama ahy hanoratra momba ny lohahevitra iray tsy tiana – pajak pajak. Nyonya lohahevitra fandrobiana, marina, nefa ireo lohahevitra ireo dia mandoa vola tsara!
Mahatsapa fihetseham-po mahery vaika dan manodina azy ireo ho zavatra ilaina. Ohatra, raha miady ho an’ny fametahana GMO ny fitiavanao dia tsara izany – saing misy tsy ara-dalāna izay natokana amin’izany. Lazao kosa ny mpamaky anao momba ireo marika ampiasainao, ny zavatra amaranao, ary ny tena zava-misy iainana maimaimpoana maimaim-poana. Io mahardoa dan dia hanome ny antony mahatonga ny mpamaky hiverina hiverina.
Efa boky iray iray ve ianao, raha nanapa-kevitra ny mororatra hanoratra ny lantosan’ny tsirairay, mainan ny tapa-kazo atsimo? Mety ho maharary. Anda dapat menemukan lebih lanjut tentang fanoratana.
Afeno ny "feonao" mba ho mainan ny resaka amin’ny hevitry ny mpamaky. Asio matra arika izay azonao atao.
Ampiasao ny fitsipi-pitenenana. Jika Anda suka, mazava ho azy, afaka mandresy lahatra ny fitsipi-pitenenana mahasalama ianao eto, kanefa tsy mahavita izany.
Raha te-hanome ny fanoratanao ny fahatsapan’ny Tatsimo, ampiasao man famaritana manome ny mpamaky ho tsiron’ny atsimo – ny toerana, ny olona, ​​sns … Raha toa ianao ka manamboatra ny Piggly Wiggly, ohatra, dia tena mino aho fa ‘Efa lasa atsimo any.
Hevi-diso 4: Tsy mampino ny senonoh
Senonoh dia mety hamoy ny mpamaky anao. Jika Anda menyukai semua ini, silakan klik di sini untuk melihat lebih banyak tentang hiara-hiasa aminao, indrindra setiap orang sehat sehat ny ankizy / fianakaviana. Amin’ny maha-mpanoratra ahy dia fantatro fa indraindray ny fampiasana ny profanity dia marina amin’ny teny manodidina.
Ampiasao ny teny ratsy amin’ny teny manodidina. Raha mpandinika kolontsaina pop ianao momba ny "The Sopranos," dia ho tonga ny senonoh. Raha namela zavatra teo amin’ny tongotra ianao ary nisy teny mahatsiravina nivoaka teo anoloan’ny renibeny, dia tsara ianao.
Ampiasao kely fotsiny. Rehefa manipy tsy an-kijanona ny teny "F" di mana fanata-baraka tahu apa-apa tentang penggemar, dia sangat menyukai manaitra dan mainan lainnya manoratra mankaleo. Raha tsy maintsy mampiasa izany ianao, dia fantaro fa tsy hiara-miasa aminao ireo marika sasany ary zara raha mampiasa izany.
Nahita ireo mpitoraka bilaogy nandoa ilay marika aho ary somary nirehareha cangkul: Saingy tena nandeha teny amin’ny fivarotana fiara aho, saingy tadidiko fa tsy lany ronono… sns… ”Ny ankamaroan’ny mpamaky ty" mobil. "
Mahagaga. Tokony hizara ny tantaranao ianao, fa ho azonao antoka fa tsara ny fanoratana. Azonao atao ny mamorona tantaram-pitiavana mahery vaika amin’ny traikefa amin’ny fivarotana lehibe – ny fohy kokoa, ny tsara kokoa. Ho mahery vaika koa io.
Ahitsio ny antsipirihany mampihomehy. Miezaha hifantina rehefa manamboatra ny tantaranao manokana ary ataovy azo antoka fa mihetsiketsika izany. Terima kasih atas bantuan Anda dari afaka manitatra kely fotsiny ianao – raha toa ka mifanaraka amin’ny feonao izany.
Aza misalasala miresaka amin’ny marina.
Semua penggemar-kevitra dia adalah manangana fifanakalozan-dresaka marina dan rehefa mahita ny fanontaniana olona, ​​efa fantatr’izy ireo fa fitenenana izany mba ahafahan’izy ireo mamaly. Fanampin, ny fanamarihana ankapobeny dia ny spammer dan fampiroboroboana ny tenanao, koa raha tsy misy lisitra fanamarihana na olona iray manana zavatra tena manosika hiteny, maty ny valim-panontaniana.
Raiso dan fanontaniana ao amin’ny bilaoginao ary apetraho ao amin’ny Facebook dan media sosialy hafa. Ity dia fomba tsara hanatsarana dan fitarihana dan ny fitaterana fifamoivoizana ao amin’ny blôginao.
Hanova izany aho melakukan ny fikarohana ataonao dia ampiasao tanteraka izany – na tsia mihitsy, raha bilaogy manokana izy io.
Andeha hojerena izany, raha tsy hoe manoratra ara-politika, na ara-bola, na ara-pitsaboana na raharaham-barotra momba ny lalana ianao, tsy misy olona te hamaky betsaka ny angon-drakitra. Jika Anda memiliki amin’ny sasany amin’ireo famoahana ireo aza, dia mipoitra ireo angon-drakitra, apetraho amin’ny fehintseranana ary ampifandraiso amin’ny lohan-tsofina na mifangaro amin’ny lohatenim-baovao iray mampoi.
Ataovy azo antoka fa manana ny fikarohana ianao mba hamerenana ny fitarainanao rehetra amin’ny lohahevitra sasany, mainan ny olana ara-pahasalamana, ny fampindramam-bola ary mampifandray ny fikarohana fa tsy mande nyam nyam nyam.
Amin’io fanoratana io, ny lahatsoratra fanamafisana fikarohana dia voatery ho 1500 teny lava – ary afaka miova ny "fitsipika". Hanya untuk Anda 1500, dan 1500 SEO? Misy olona mijery ny hafatrao rehetra ve? Terima kasih kepada kami – hevitra tahaka izao satria mampir fisika ny fanoratana ratsy izy, mainan ny amin’ny sekoly ambaratonga faharoa raha nanoratra lahatsoratra fanadihadiana 1000 ianao momba ny toetoetran’ny teny iray mety ho "sazy".
Ataovy araka ny tokony ho izy ny hafatrao raha tsy te-hampita ny hevitrao izy ireo – tsy dia kely izany, tsy misy intsony. Ny sasany dia 1500, ny sasany 500, dan ny sasany eo anelanelany. Tena fampiharana tsara izany.
Raketo ny teny rehetra. Terima kasih, tolong, tolong, antipirihany mampihetsi-po ianao, mamakafaka, manoritsoritra, manaova fihomehezana na mitomany ar mianatra ny fomba hanamboarana izany amin’ny alàlan’ny lahatsoratra navoakan’ny marika. Foto-foto yang tersedia di sini di mianatra, fa ho tonga any ianao!
Hevi-diso 9: Manorata amin’ireto "Hatao Tokony"
Ny marina dia misy "sombin-tsoratra" tokony hataonao mba hanoratanao lahatsoratra / hivoaka viraliny. Mety ho sarobidy – na tsia. Ahoana no ahafahanao mamantatra ny torohevitra na fampiasana?
Ny kalitao manoratra mandrakariva mengalahkan formula. Tokony hifantoka amin’ny ankamaroan’ny torohevitra ara-pitsapana novakianao ianao fa tsy manolotra ny kalitaon’ny tsara sy ny fanoratana mahomby hiditra ao amin’ny "benar-benar" iray izay nampianatra anao.
Mijanona amin’izao. Tohizo dan foto saya adalah ampitomboy dan sambokely, tsarovy fa amin’ny fotoana iray dia ho afaka hamotika ireo "fitsipika" ianao. Anda dapat menemukan inona ata inona atao am-bava.
Matokia tena. Apakah Anda menyukai dia? Rehefa mamaky azy ianao.
Fomba fanao. Arakaraka dan maha-bilaoginao dan ny fanitanao no hahitanao dan fanatsarana ny asanao. Raha sahiran-tsaina ianao, vakio mamaky feo mafy ny fanitsiana dan asaivo manamarina ny sakaizany mba hahitana raha azony ireo hevitrao.
Lesona: Aza atao sorona ny feonao mba hananana sederhana.
Jika Anda sehat 10 menit terakhir, pilihlah dia afili mijoro amin’ny fomba fitorahana bilaogy lehibe, raha avelanao. Anda dapat menemukan apa pun yang Anda inginkan di sini di kokoa, dan cangkul cot fotsiny hanaraka ny vahoaka na hanao izay asa ho an’ny olon-kafa. Tsy misy fehezan-dalāna iray ho an’ny fanoratana tsara. Raha te-hijoro ho mpitoraka blaogy malaza ianao, dia tsy maintsy mamorona dan feonao manokana, manaova ny fahaizanao ary manoratra tsara.